“..Dadka Haddii Kalsoonidu ka lunto, Go’aan kasta oo la qaato Cid aqbalaysaa Ma jirto..” - somalilandlivemedia
“..Dadka Haddii Kalsoonidu ka lunto, Go’aan kasta oo la qaato Cid aqbalaysaa Ma jirto..”
8:48 19. November 2017
“..Maxaad sheeganaysaan, Sanaaduuq, halkan soo fadhiista (oo loo tiriyaa Cidda cabanaysa) Telefiishannadeenu waxay u baahin karaan si Toos ah, oo marba Sanduuq la tiriyo Ummadda oo dhami Daawanayso oo laga Amba-baxo. Xisbigii guulaystay wuu is-ogyahay, Tiradiisana wuu haystaa…”
Hargeysa( SLL.-Yool)-Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay Ahmiyadda Nabadgalyadu u leedahay Dalka, waxaanu Dadweynaha ugu baaqay inay meel uga soo wada jeedsadaan ilaalinteeda.
Sheekh Aadan-Siiro wuxuu farriin u diray Xukuumadda “Xukuumadda waxaanu kula talinaynaa, waar Muranka siyaasiga ee Dalka ka jira ee Axsaabtu leedahay ka dhex baxsanaada oo Caddaalad ka sameeya, Waayo? Dadka haddii Kalsoonidu ka lunto, Go’aan kasta oo la qaato Cid aqbalaysaa ma jirto, laakiin Qofku markuu kalsooni haysto Go’aan kasta sidiisa ayuu ku qaadanayaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Komiishanka waxaanu kula talinaynaa Go’aannada aad soo saaraysaan Caqli iyo Xikmad ha ku jirto, Waayo? Dalka idiinkaa kala saaraya, Go’aanka aad qaadataan ayaa Taariikhda Ummadda geli doona.”.
Daawo Wasiir Cukuse Oo Ka Hadlay Shaqaaqadii Shalay Ka Dhacday somaliland
Musharax Cirro Oo Masuuliyiin Xilal U Magacaabay Iyo Magacyada Masuuliyiinta& Xilalka Loo Magacaabay
Barnaamijkan dhir beerista ah oo lagu magacaabo “Rejo Beer, Geed Beer”
Halkan Ka Daawo Hees Amaan Ah Oo Markii Ugu Horeysay Loo Qaaday Oo Lagu Boggaadinayo Afada Qabyaalada
Newer PostXukuumada Xisbiga KULMIYE Iyo Doorashooyinka ay Qabatay intay Xukunka Hayeen
Older Post Ilaahoow HAA Iyo MAYA Ha-naga Wada-yeedhsiin… Koomishanka Doorashooyinka oo Qirtay Buugaagtii Codbixintu Inay Gacantooda ka Baxday